Shiliana Mpanakanto Mizara Ny Heviny Momba ny VIH : Hatairana, Fahatsiarovantena ary Fampanarahana Fenitra Maha-Olona · Global Voices teny Malagasy
Shiliana Mpanakanto Mizara Ny Heviny Momba ny VIH : Hatairana, Fahatsiarovantena ary Fampanarahana Fenitra Maha-Olona
Voadika ny 11 Febroary 2017 7:42 GMT
“Toy ny vao navoaka avy anaty vata fampirimana entana indray aho nandre hoe mitondra VIH. Toy izany no nahatsapako azy. Toy ny hoe fotoana faharoa fanararaotra. Fa tamin'ity indray mitoraka ity, tsy ho amin'alahelo no itondralko azy, fa ho aminà fampisehoana.” Sary navoaka tamin'ny fampiasàna lisansa Creative Commons 4.0.
Ny lahatsoratra manaraka etoana dia famerenana ny tafa notanterahan'i Palo Valencia ho an'ny media shiliana Pousta ary navoaka tany amboalohany tao amin'ny tranonkalany, nampiasàna ny lisansa Creative Commons 4.0.
“Katsetsitra i El Sombra.” Izany no nolazain'i José Abarza ho fanolorany ny tenany. Satria tsy i José no eo anoloako fa i el Sombra, ilay olona nofidiany holalaovina nefa sady mijanona hatrany ho olombelona ihany. Nahavita nampalaza ny tenany tao Shily i José Abarza amin'ny naha-mpikambana azy tao anatin'ny tarika “reaggeton dissident” Marako Intenso, izay milaza fa mitety ny tontolo tsy hita mason'ny miralenta ary manome sary vaovao ho azy io.
“Fampisehoana hafahafa” no ataon'i Abarza. Izany no amaritàny ny zavatra ataony. Fony vanimpotoanan'ny Marako Intenso no nanombohany, fotoana nihiràny ireo tononkira mitantara zavatra tena niainana.
Ohatra, tantarain'ilay hira Trava asesina ny fiainan'ny vavilahy iray nifandray tamin'olona telo izay novonoiny avy eo, ary noho izany dia nigadra nandritry ny sivy taona. Na Sexy pasturri, izay miresaka olona iray nahafinaritra azy saingy lavon'ny zava-mahadomelina :
Matetika, tifirina amin-javatra maro ianao, ary farany lasa toy ny fenitra ekenao ny toejavatra maro izay […] tsy ataonao mahataitra intsony. Fa rehefa afaka amin'izany ianao, heverinao fa tena henjana ilay izy […]
Saingy efa momba ny lasa ny Marako Intenso, ary mpankanto miahy tena i Sombra :
Adala aho. Hafahafa. Miresaka ny Sida, ireo aretina azo amin'ny firaisana, ny fanimbinana kely amin'ny tena, ny fanivaivàna ny hafa. Androany, manao zavatra mitovitovy amin'ny Marako Intenso aho, saingy tsaratsara kokoa, voakajy sy tsara jerena kokoa. Tsy maka sary samirery ny tenako intsony aho, manana olona aho manao izany sy manao ny fanambatambarana ny sary. Azoko atao ny mangataka izay rehetra tiako: tiako ho toy izao ny fanenony, na aleo asiana feom-basy mipoaka. Taloha, tsy maintsy mifandrindra sy mionona amin'izay misy any anaty aterineto aho, izay no nampianatra ahy hiasa niainga avy amin'ny tsy nisy. Fa ankehitriny, efa manana fitaovana misimisy ho entina mamorona aho.
Tamin'ny volana Martsa, nipoitra tao anaty lahatsoratra iray tao amin'ny media shiliana El Desconcierto i Sombra, mba hiresaka momba ny VIH, hitantara ny maha-olona mitondra otrikaretina azy. Izay mety ho tantara ratsy tsy hisy fiafaràna ho azy sy ho an'ny maro no fahitàna azy :
Indray andro, vaky ny resaka. Ny ampitso, tototra ny vata fandraisako hafatra : “Eo anilanao aho”, “Manohana anao aho”. Novaliako hoe “tsy mbola miala aina aho, ary vao mainka velona kokoa noho ny fahiny”. Ny zavatra tena tsy tiako, dia ny hafa mahatsiaro henatra sy fanaintainana.
Aleon-dry zareo mahita anay maty, [izahay pelaka]
Mitondra otrikaretina VIH i Sombra, efa taona iray mahery kely, saingy tsy maintsy niaina dingana henjana tao anaty fisalasalàna. Tsy maintsy nandalo volana maro nanao fitiliana isankarazany, nefa tsy mbola nahafantatra izay nahazo azy. “Tamin'izany dia hoe , na io VIH, na homamiadan'ny rà. Naleoko ny VIH, fa tsy ny homamiadana”, hoy izy. Avy eo, karazana dokotera maro no nifandimby nandray an-tànana azy talohan'ny fitiliana. Ny sasany mandray marary hatramin'ny 17 ao anatin'ny ora iray sy sasany. Ny hafa tonga mba hitily ny marariny miaraka amin'ireo mpzatra raharaha. Amin'izao fotoana izao, tsy vonona hiatrika fikarakaràna ny tenany. Tsy dia tiany loatra ny teny hoe fitsaboana ara-panafody :
Manana namana iray aho izay efa ho pilina valo isaky ny mandeha no ateliny, ary tsy ny sida no hahafaty azy fa ny fahosàn'ny aty aterak'izany rehetra izany. Farany, aleon-dry zareo mahita anay maty, [izahay pelaka] saingy fampiasambola goavana ny fisianay. Miaina irery, [mifety lava] mandritry ny fiainanay, mividy fitafiana lafo, tsy misy zaza hovelomina. Nahoana ry zareo, ireny mpandraharaha adala ireny, no mitady izay hamonoana anay?
Ary momba ny valin'ny fitiliana, hoy i Sombra :
Toy ny vao navoaka avy anaty vata fampirimana entana indray aho nandre hoe mitondra VIH. Toy izany no nahatsapako azy. Toy ny hoe fotoana faharoa fanararaotra. Fa tamin'ity indray mitoraka ity, tsy ho amin'alahelo no itondralko azy, fa ho aminà fampisehoana. Raha mahatsiaro ho tsy dia mahazo aina loatra ny reniko ao anatin'izany rehetra izany, mazava loatra fa hohazavaiko aminy mba tsy hitondràny fanaintainana sy alahelo. Raha miray amin'olona iray aho, mazava ho azy fa tsy maintsy lazaiko azy. Tsara kokoa ny hahafantarany azy mialoha mba hisorohana ny resaka toy izao. Satria tsy mitovy daholo ny fandraisan'ny olona zavatra. Hoy ireo namako amiko [“aza mikitikitika ahy”], dia hoy aho amin'izy ireo “anio alina, hotriariko ny lalandràko dia ho aparitako amin'ny olona rehetra”. Tena manahirana. Saingy ny hery sy tanjaka, izaho no manana azy. Fitaovam-piadiana mandripaka aho.
Aminy, araraotin'ireo vondrona eo amin'ny fitondràna ny kabary momba ny VIH :
Manatsaratsara ny sida amin'ny alàlan'ny hazokely daholo izao olona rehetra izao. Ny 1 Desambra, nisy diabe natao hitenenana hoe “Voan'ny sida aho”. Marary saina. Ndeha isika hivoaka daholo hiteny hoe mitondra otrikaretina VIH! Naharay fanasàna aho ary dia hoy aho “holà ! Ndeha ho afafiko ny ràko dia amin'izay ho voa daholo izy rehetra”. Hoy ny valiny azoko : “Oh, tena resaka matotra anie e !” Tsy afaka ny hanao resadresaka ianao no sady hampitahotra ny olona. Ndeha hatao manaraka ny fenitra maha-olona ny resaka VIH, ary manomboka dieny izao izany, tsy iandrasantsika ny ampitso. Tsy azoko mihitsy ny amin'ireo olona matahotra ny VIH. Fa izao e, ekena, aretina misoko mangina sy maharitra io. Saingy raha tsaboinao tsara, dia hiaina anaty fahasalamana toy ny olona tsy tratry ny VIH ianao. Mitondra ny VIH aho. Ary olombelona feno sy tanteraka.
3 ora izayHafanam-po